जीवनसाथी रोज्न नजरिनले अपनाएको यस्तो शैलीको विश्वभर चर्चा, भाइरल बन्यो पोस्ट
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष १६, २०७३ समय: १२:१७:०६
एजेन्सी । लण्डन निवासी नजरिनले विवाहअघिको एक हप्तामा आफ्नो हुनेवाला पतिलाई प्रश्नहरुले भरिएको ८० वटा इमेल गरिन् । इमेलमा उनले महिलाप्रतिको धारणा, नोकरी, विवाहपछि कहिले बच्चा जन्माउनेसहितका सयौँ प्रश्न सोधेकी थिइन् । इमेल आदान-प्रदान भइरह्यो । सबै कुरा चित्त बुझेपछि यो जोडी अहिले विवाह बन्धनमा बाँधिएको छ ।
उनीहरु विवाहपछि साउदी अरब सिफ्ट भएका छन् । नजरिले आफ्ना पतिसँग विवाहअघि गरेको सवाल-जवाफ अनुभव फेसबुकमा शेयर गरेकी छन् । उनको फेसबुक पोस्टलाई हजारौँले लाइक तथा कमेन्ट गरेका छन् । दुई हजारभन्दा बढी त शेयर नै भएको छ । कमेन्टमा अधिकांशले उनीसँग आफ्नो जीवन साथी छान्न सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
दक्षिण भारतीय मूलकी नजरिनले लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स तथा युनिभर्सिटी अफ नटिङ्घममा अध्ययन गरेकी हुन् । परिवारका सदस्यले फजल नामका युवकसँग उनको विवाह गरिदिने प्रस्ताव गरे ।
सुरुमा उनले आफ्नो परिचय दिन फजललाई दुई पेज लामो इमेल पठाइन् । त्यसको पहिलो पेजमा आफ्नो बारेमा लेखिएको थियो । दोस्रो पेजमा कस्तो जीवन साथी चाहेको हो भन्ने उल्लेख थियो । यसपछि इमेलमै फजलसँग बातचित सुरु भयो ।
उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘मैले फजलसामु प्रश्नको वर्षा नै गराएँ । मैले सोधेकी थिएँ, तपाईं कस्तो जीवन साथी चाहनुहुन्छ ? केही वर्षपछि हाम्रो यो सम्बन्धलाई कहाँ पुगेको देख्नुहुन्छ ? जिन्दगीबाट हामीले के चाहन्छौ ? जस्ता तमाम् प्रश्नहरु उल्लेख थिए ।’
उनी अघि भन्छिन्, ‘हाम्रो संस्कार पनि अचम्मको छ । बरु रेष्टुरेन्टमा खानको अर्डर दिन हामीलाई समय लाग्ला तर, विवाहको कुरामा एक भेटमा केही मिनेट कुराकानी गरेरै निर्णयको अपेक्षा गर्छौँ ।’ तपाईंको एक निर्णयले जीवनमा इमोशनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल र फिजिकल प्राभाव पार्छ । त्यसैले आफ्नो जीवन साथी रोज्न किन समय नलिने त ? साझा पाेस्टबाट